on: २४ भाद्र २०७५, आईतवार १२:०३ लगानी
नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा उत्साहजनक वृद्धि
नियमित कारोबारका लागि ५ दिन खुला रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा यस साता कुल १ सय ९३ कम्पनीको कारोबार भएको छ । यस साता ३२ हजार २ सय ८५ पटक भएको कारोबारबाट २ अर्ब ८८ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड २ लाख ५५ हजार ६ सय ८० कित्ता शेयरको खरीदविक्री भएको छ । यस साता नेप्से परिसूचकका साथै रकममा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । कारोबार भएको शेयर सङ्ख्या गतसाताको भन्दा ३ सय ३ दशमलव ३४ प्रतिशत बढी हो । कारोबार सङ्ख्या १ सय ७३ दशमलव ८८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कारोबार रकममा गतसाताको भन्दा २ सय ५९ दशमलव ३४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अघिल्लो साता कारोबारका लागि ४ दिन चलेको बजारमा ११ हजार ७ सय ८८ पटकको कारोबारबाट ८० करोड ३० लाख ७ हजार रुपैयाँबराबरको २५ लाख ४२ हजार ७ सय १० कित्ता शेयरको खरीदविक्री भएको थियो ।
लामो समयदेखि घटिरहेको नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा यस साता उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । नेप्से परिसूचकमा साताको अन्तिम दिन थोरै अङ्कले कमी आउनुले बजार बढेको मौकामा कारोबारीले मुनाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा बजारमा विक्री चाप सृजना भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा नगरेको अवस्थामा आगामी दिनमा ती संस्थाले लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार लाभांश घोषणा गर्ने हो भने बजारले थप गति लिने देखिन्छ । यस साता नेप्से ४८ दशमलव ०८ बढेर भएर अन्तिम दिन १ हजार २ सय २९ दशमलव ७७ अङ्कमा बन्द भएको छ ।
यस साता शुरूका ४ दिनसम्म नेप्से परिसूचक क्रमश ८ दशमलव ५९ अङ्क, १५ दशमलव ९८ अङ्क, ३ दशमलव ९८ अङ्क, २३ दशमलव ८९ अङ्क बढेकोमा अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ३६ अङ्क घट्दै यो साता बजार बन्द भयो । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबारपश्चात् १ हजार १ सय ८१ दशमलव ६९ अङ्कमा बजार बन्द भएकोे थियो । यससँगै गतसाता नेप्से परिसूचकमा अघिल्लो साताको तुलनामा समग्रमा ४ दशमलव ०७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यता ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि अघिल्लो साताको तुलनामा १० दशमलव ५६ अङ्क बढेर २ सय ६० दशमलव ३५ अङ्कमा आइपुगेको छ ।
यस साता कारोबार रकमका आधारमा एनएमबी बैङ्कको शेयर अग्र स्थानमा छ । साताभरिमा यस कम्पनीको कुल २२ करोड ५० हजारबराबरको ६ लाख २१ हजार १२६ कित्ता शेयरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, कारोबार भएको शेयर सङ्ख्या (म्युचुअल फण्डको हकमा युनिटबाहेक)को आधारमा एनएमबी बैङ्कको शेयर अग्र स्थानमा छ । त्यसैगरी, कारोबार सङ्ख्याका आधारमा पनि एनएमबी बैङ्क अग्र स्थानमा छ ।
यस साता काबेली विकास बैङ्क लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै ४२ दशमलव ७१ प्रतिशत शेयरमूल्य कमाएका छन् भने गुमाउनेतर्फ अग्रणी कम्पनीमा ङादी गू्रप पावर लिमिटेडका शेयरलगानीकर्ता छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले साताभरको कारोबारबाट १२ दशमलव ८५ प्रतिशत शेयरमूल्य गुमाएका छन् ।
उच्च अङ्क बढेको नेप्सेलाई १२४० मा प्रतिरोध
गत साता नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ । १ हजार १ सय ८२ मा शुरू भएको नेप्से परिसूचक ४८ अङ्क अर्थात् ४ प्रतिशत बढेर १ हजार २ सय २९ दशमलव ७७ को विन्दुमा बन्द भएको छ । गतसाता नेप्से परिसूचकले १ हजार २ सय ४७ दशमलव ३५ को उच्च विन्दु कायम गरेको थियो । २ महीनाभन्दा अघिको १ हजार २ सय ४० को प्रतिरोध हालको समयमा पनि प्रतिरोध बनेको हो ।
५ दिने र २० दिने मुभिङ एभरेजअनुसार नेप्से परिसूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा छ ।
एटीआर सूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा छ । यसले नेप्से परिसूचकमा उतारचढाव बढेको सङ्केत गरेको छ ।
ओबीभी सूचक साताभरि बढे पनि बिहीवार भने घटेको छ । यसले बिहीवार शेयरमूल्य र कारोबारले बजारलाई साथ नदिएको सङ्केत गरेको छ ।
स्टोकाष्टिक सूचक ओभरबठ क्षेत्रनजीक छ । यसले केही दिनयता खरीदकर्ताको चाप बढेको सङ्केत गरेको छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकले नेप्से परिसूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको सङ्केत गरेको छ । १ हजार २ सय ४० अङ्क नेप्से परिसूचकका लागि प्रतिरोध रहेको छ । त्यसैले यो प्रतिरोध तोडेमा बजार सकारात्मक हुने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : बैङ्किङ समूह रेक्ट्राङ्गल भन्दा माथि
बैङ्किङ समूहको ६ सेप्टेम्बर, २०१८ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टका आधारमा बजारको अन्तिम अङ्क १ हजार ७२ मा छ । यो अघिल्लो हप्ताभन्दा ५१ अङ्क अर्थात् ५ प्रतिशत बढी हो । यो साता ५ दिन चलेको कारोबारमा यस समूहको रू. १ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख ६६ हजारबराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
अघिल्लो साताको विश्लेषणअनुसार बजारले यो साता रेक्ट्राङ्गल आकृतिको माथिल्लो प्रवृत्तिरेखालाई तोडेर केही अङ्क माथि जान सफल भएको छ । अन्तिम दिनमा बजार केही सच्चिएको छ ।
एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : छोटो र लामो समयावधिका र्र्ईएमएहरूले गोल्डेन क्रश आकृति बनाएकाले बजार सकारात्मक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सङ्केत गरेको छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ७१ अङ्कमा छ । यो साता यसको प्रवृत्तिले बजारमा यस समूहको शेयर बढी खरीद भएको सङ्केत गरेको छ ।
स्टोकाष्टिक एक्सिलेटर : यो सूचकको प्रवृत्तिले बजारमा शेयर बढी खरीद भएको र बजार केही सच्चिन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले सुटिङ स्टार आकृति बनाएको छ । यसले बजारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरे पनि अर्को दिनको मैनबत्तीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजारले बढ्दो प्रवृत्तिको प्रारम्भिक सङ्केत गरे पनि हाल १ हजार १ सयको मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधलाई तोड्न असफल रहेकाले लगानीकर्ताहरू सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । यदि बजार यो प्रतिरोधभन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ सकारात्मक हुन सक्छ । अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १ हजार १ सय ३५ मा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, यदि बजार रेक्ट्राङ्गलको तल्लो प्रवृत्ति रेखाभन्दा तल रहेमा बजार नकारात्मक क्षेत्रतर्फ जान सक्ने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : होटेल समूह बढ्दो च्यानलमा सीमित
यस समूहको ६ सेप्टेम्बर, २०१८ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टका आधारमा अन्तिम कारोबार अङ्क १ हजार ८ सय ७७ मा छ । यो अघिल्लो साताभन्दा ६० अङ्क अर्थात् १ दशमलव ३० प्रतिशत बढी हो । यो साता ५ दिन चलेको कारोबारमा यस समूहको रू. १ करोड २९ लाख २५ हजारबराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
चार्टमा देखिएबमोजिम गत २ महीनादेखि बजारको उतारचढाव बढ्दो च्यानलमा सीमित छ । हाल यो प्रवृत्तिले १ हजार ९ सयको मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधको परीक्षण गरेको देखिन्छ ।
एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : चार्टमा देखिएको ईएमए प्रतिरोधको रूपमा देखिएको छ । यो प्रतिरोधलाई बजार प्रवृत्तिले १ महीनाभित्र ३ पटक परीक्षण गरिसकेको छ । हाल बजारको प्रवृत्ति ईएमएभन्दा माथि जाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ६० अङ्कमा छ । यसको प्रवृत्ति सकारात्मक देखिएको छ ।
स्टोकाष्टिक एक्सिलेटर : यसको प्रवृत्तिले बजारमा आपूर्तिभन्दा माग बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले सुटिङ स्टार आकृति बनाएको छ । यसले, बजारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरे पनि अर्को कारोबार दिनको मैनबत्तीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि बजारले बढ्दो च्यानलको माथिल्लो या तल्लो प्रवृत्तिरेखालाई निश्चित रूपमा तोड्न सफल भएमा बजार केही समयका लागि क्रमशः त्यही दिशातर्फ जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । हालको तत्कालीन प्रतिरोध र टेवा यही च्यानलको प्रवृत्तिरेखा रहेको देखिन्छ ।
माइक्रोफाइनान्स सूचकलाई १५४० मा बलियो प्रतिरोध
घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको माइक्रोफाइनान्स समूह गतसाता भने ४० अङ्क अर्थात् २ दशमलव ७३ प्रतिशत बढेर १ हजार ५ सय १४ मा बन्द भएको छ । गतसाता माइक्रोफाइनान्स समूहले १ हजार ५ सय ४२ दशमलव ७९ को उच्च विन्दु कायम गरेको छ भने १ हजार ४ सय ६९ को न्यूनतम विन्दु कायम गरेको छ । १ हजार ५ सय ४० को विन्दुले विगतमा पनि ३ पटक टेवा र प्रतिरोधको भूमिका निर्वाह गरेकाले हालको समयमा यो बलियो प्रतिरोध भएको हो ।
५ दिने र २० दिने मुभिङ एभरेजअनुसार माइक्रोफाइनान्स समूह बढ्दो प्रवृत्तिमा छ ।
एटीआर सूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेकाले यसले केही दिनयता माइक्रोफाइनान्स समूहमा उतारचढाव बढेको सङ्केत गरेको छ ।
ओबीभी सूचक गतसाता सकारात्मक रह्यो । यसले शेयरमूल्य र कारोबारले बजार सकारात्मक रहेको सङ्केत गरेको छ । तर, बिहीवार भने यो सूचक घटेको थियो ।
स्टोकाष्टिक सूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा छ । यसले यस समूहमा खरीदकर्ताको चाप बढेको सङ्केत गरेको छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकले माइक्रोफाइनान्स समूह बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको सङ्केत गरेको छ । तर, सबल प्रतिरोध परीक्षण गरेर घटेकाले सो प्रतिरोध नतोडेसम्म बजार सकारात्मक हुने सम्भावना केही कम देखिन्छ ।